June 10, 2013 – democracy for burma
NAY MYO ZIN-ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ သတ်ဖြတ် ခံနေရသော ဥပဒေမဲ့ အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ်များ
On June 10, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ သတ်ဖြတ် ခံနေရသော ဥပဒေမဲ့ အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ်များ အမြန်ဆုံး အဆုံးသတ် ငြိမ်းချမ်းသွားစေရန် နှင့် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်သူများအား ဖေါ်ထုတ် အရေးယူပေးပါရန် မြန်မာ့ လူမှုဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွန်ယက် မှ မြန်မာ နိုင်ငံသားများက မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ အစိုးရ လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူများ နှင့် မလေးရှား နိုင်ငံရောက် မြန်မာသံရုံး တာဝန်ရှိသူများ အားလုံးအား အလေးအနက် တောင်းဆို တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
မြန်မာ့လူမှု ဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွန်ယက်
by:Nay Myo Zin
မလေးရှား နိုင်ငံရှိ မိမိတို့ မြန်မာ လုပ်သားများ အသက်ဘေး မလုံခြုံခြင်း၊ အကြမ်းဖမ်း သတ်ဖြတ် ခံနေရခြင်းများ အတွက် မိမိတို့ မြန်မာ နိုင်ငံသားများက အထူးပင် စိတ် ကြေကွဲ ခံစားမိကြောင်း။
ထို့ အတွက် …………
မလေးရှား နိုင်ငံ ရှိ မြန်မာ သံရုံး အနေဖြင့် မိမိတို့ နိုင်ငံသားများ ဘေးကင်း လုံခြုံရေး အတွက် သံတမန်နည်းလမ်း၊ သံတမန် လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ အသုံးပြုပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ကူညီပေးစေလိုပါကြောင်း။
မလေးရှား နိုင်ငံတွင် ယခုကဲ့သို့ ဘာသာရေး ၊ လူမျိုးရေး အခြေပြုသော ကလဲ့စားချေ သတ်ဖြတ်မှုများ ပေါ်ထွက်လာရခြင်း အကျိုးဆက်ဧ။် ရင်းမြစ်များကို မြန်မာ အစိုးရ အနေဖြင့် ထိရောက်စွာ စောစီးစွာ ကာကွယ်တားဆီး ထိန်းသိမ်း ကြပ်မတ်ရန် အားနည်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အထူးစိုးထိတ်ပူပန်ဖွယ်ရာ လူမျိုးရေး ကလဲ့စားချေ သတ်ဖြတ်မှုများဖြစ်ပွားလာသည်ဟု ယူဆ သုံးသပ်မိပါသည်။ Continue reading “NAY MYO ZIN-ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ သတ်ဖြတ် ခံနေရသော ဥပဒေမဲ့ အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ်များ” →
ယခုရက်ပိုင်းများအတွင်း မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော -MAI PRICE REDUCING
On June 10, 2013 June 11, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
UPDATE 11.JUNE 2013
Thanks MAI (Myanmar Airways International) for reducing the price for the people who are facing difficulties to come back.
ယခုရက်ပိုင်းများအတွင်း မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ၍
ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသမှုခံနေရသူများနှင့် အခက်အခဲတွေ့နေသော
မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကိုဝင်းက ကနဦး လှူဒါန်းငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ အား Eleven Media Group မှတစ်ဆင့် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ကပုန်း နာရေးကူညီမှုအသင်းသို့ ဇွန် ၁၁ ရက်တွင် ပေးပို့လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ လိုအပ်ပါက ထပ်မံ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ထို့ပြင် မလေးရှားနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာလိုသူ
မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဇွန် ၁၂ ရက်မှ စတင်၍ တစ်လတိတိကို MAI လေကြောင်းလိုင်း ခရီးစဉ်များတွင် လေယာဉ်လက်မှတ်ခ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။eleven media
မြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်း – Malaysia-KAMPUNG FREE FUNERAL SERVICE-SOCIAL TEAM
On June 10, 2013 June 10, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
အဖ ဦးစောလှစိန်+အမိဒေါ်နော်ဆဲဖေါ တို့၏သား) မလေးရှားနိုင်ငံသို့ တရားဝင် လာသည်မှာ ( ၄ ) ရက် သာရှိပါသေးသည်။ ဆလာရန်း ဆေးရုံ ကြီးတွင်အတွင်းလူနာအဖြစ် အိုင်စီယူ ဌာနတွင် အရေးပေါ်တင်ထားသည့် Saw Bur Blu Gay passport MA 004462 အသက် (၂၀ ) နှစ် ဧရာဝတီ တိုင်း ငပုတောမြို့နယ် တွင်နေထိုင်ပါသည်။ ၈-၆-၂၀၁၃ ရက် မလေးရှားစံတော်ချိန်( နေ့လည် ၁းနာရီ ) တွင်ဆလာရန်ဆေးရုံကြီး 4B တွင်သေဆုံးသွားပါသည်။
“ မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော မြန်မာလူမျိုးများအပေါ်
သတ်ဖြတ်မှုများကြောင့် သေဆုံးထိခိုက်ခဲ့ရသော မြန်မာလူမျိုးများ၏
သတင်းများကို ကပုန်း(Kampung) ခုနှစ်ရက်သားသမီးနာရေးကူညီမှု
အသင်းမှ လွှင့်တင်ထားသော ဤ Page –
တွင် မှန်ကန်တိကျစွာဖော်ပြပေးပါမည်။ ထို့ပြင် မလေးရှားရောက် မြန်မာ
နိုင်ငံသားတို့၏အခက်ခဲ၊ ပြဿနားများမှသိရှိသင့်၊ သိရှိအပ်သည့် အဖြစ်
အပျက်အကြောင်း အရာများကို မထိမ်ချန်ပဲ အမှန်တရားအတိုင်း
သိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။ ”
– မြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်း ( မလေးရှား )
အလောင်းများစာရင်း -၁။ မင်းဇော် passport မရှိ ၃၀-၅-၂၀၁၃ သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
မရှိသေးပါ။ အလောင်းမှာပုတ်ပွာလာမှုများရှိနေပါပြီ။ )၂။ ဝင်းခိုင် passport မရှိ ၃၁-၅-၂၀၁၃ သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
၃။ ကိုဝင်းလှိုင် passport ရှိ စာရွက်စာတမ်း မပြည့်စုံ ၂-၆-၂၀၁၃ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့က ကိုဝင်းလှိုင်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
၄။ အမည်မသိ ပုဆိုးဝတ်ထားသူ မြန်မာတစ်ဦး passport မရှိ ၇-၆-၂၀၁၃ သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
၅။ စောဘာဗလူဂေ passport ရှိ စာရွက်စာတမ်း မပြည့်စုံ ၈-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
၄င်းတို့ ( ၅ )ဦးကို သင်္ဂြိုလ်ရန်အတွက် အခက်အခဲရှိနေပါသည်။
– မြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်း ( မလေးရှား )
Five Burmese are killed in Malaysia after brutal attacks. The world silence.
မြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်း – Malaysia
On June 10, 2013 June 12, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
YANGON, Myanmar – A domestic Myanma Airways flight hadaminor landing mishap Monday, one of two on the same day in Asia involving the same model of Chinese-made twin turboprop aircraft. There were no deaths in either accident.
The accident, the third since late December, comes as Myanmar is experiencingaboom in tourism after instituting democratic reforms that caused western nations to lift most longstanding sanctions that had been applied against the previous repressive military regime.
Myanmar state television showed the scene of the bad landing in Kawthaung in southeastern Myanmar. The Facebook page of the national police said the aircraft carrying four crew members and 60 passengers swerved off one side of the runway on landing Monday onaflight from Mawlamyine that had originated from Yangon, the country’s biggest city.
State-owned Myanmar Airways skidded off the runway on landing at the Kawthaung Airport in southern Myanmar on Monday due toahydraulic system failure. No injuries were reported.
The Chinese-made MA60 plane, carrying 60 passengers and4flight crew, skidded about 200 feet west of the runway and came to rest in some bushes. Both propellers on the plane’s wings have been damaged but no one was injured.
“[The pilot] took caution in landing the airplane after seeing the hydraulic system failure signal. After the plane’s wheel touched the runway, the plane skidded off about 200 feet from the runway’s edge,” said Than Htun, managing director of Myanmar Airways.
The airplane operates daily domestic flights from Yangon to Mawlamyaing and Kawthaung.
“After the plane took off it returned back to Yangon, which they said was due to mechanical errors. Nothing happened on the way from Yangon to Mawlamyaing. It only happened when we arrived in Kawthaung. The passengers were in chaos andababy fell under the seat,” saidapassenger.
A similar event occurred on May 16 in which the MA60 plane with registration XY-AIQ on Heho-Monghsat flight overran the runaway on landing at Monghsat airport because ofabrake problem, causing two serious injuries and substantial damage to the aircraft. Continue reading “Myanmar Airways Bad landing in Kawthaung -VIDEO” →
VILLAGER ATTACKED BY SOME MUSLIM VILLAGERS IN WESTERN BURMA BORDER LOCALITY
Six Arakanese face Attacks in Kuala-Lumpur-MALAYSIA
The incident took place in the early morning at their rented wooden house, where the six Arakanese stays. A group of suspected Muslim goons approached their house at around3am and sprayedakind if gas inside the house through the holes. The inmates, who were sleeping then, soon found difficulties in breathing and also felt itching in their eyes.
BURMESE ON FACEBOOK GOES BLACK! We show our grievousness for those who had been slaughtered in Malaysia daily
We show our grievousness for those who had been slaughtered in Malaysia daily. We called for world leaders to support protecting the Burmese migrant workers where their lives are at stake there.
==========မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ တိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မလေးရှားသံအမတ်ကြီးအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် MRTV က တင်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက “မလေးရှားရှိ မြန်မာနိုင်ငံသာများ” ဆိုတဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ ယှဉ်တွဲလျက် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံသား (အစစ်အမှန်) ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ဆက်လက် အငြင်းပွားနေဆဲ (ဥပဒေနဲ့အညီ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု)ဟာ မလေးရှားမှာလည်း ကြုံတွေ့နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း သတိရှိရှိ ကြည့်မြင်သုံးသပ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ တိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မလေးရှားသံအမတ်ကြီးအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
FORUM OF BURMESE EUROPE LETTER TO Prime Minister of Malaysia -Reporting the Slaughtering of Burmese people in Malaysia
Dear The Honourable Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak,
I am wring this letter to inform you injustice facing of our Burmese people in Malaysia.
Burmese migrant workers in Malaysia are violently slaughtered almost every day
in recent weeks by state-sponsored crimes as the retaliation of recent conflicts in Burma.
According to the reports, we have learnt that these atrocious and barbaric attacks were pre-arranged and pre-plotted.We are very concerned that Burmese especially Buddhists and non-Muslims are brutally murdered and slayed to death in Malaysia.
Burmese and Buddhist migrant workers are the minority in Malaysia and Malaysia government is so far failed to protect the people of Burma. It seems that Malaysian government got no will to stop killing of non-Muslim Burmese migrant workers.
We believe in non-violent committed and we denounce any form of violent or
terrorist action taken by any group or any person.
Therefore, we call for your government to kindly address this issues urgently and
to help protecting Burmese citizens residing and working in Malaysia who are facing imminent and immediate loss of their lives.
Please send Emails to Malaysian embassies around the world :STOP KILLING BUDDHIST,CHRISTIANS…..
BURMA DEMOCRATIC CONCERN-BDC : Dear Friends, Can you please send email, tweet and post on your face book profile following message in ENGLISH as much as you can to Malaysian embassies around the world so that international community will know the suffering of Burmese migrant workers in Malaysia. Thanks U Htay Tint for your dedication and list of Malaysian embassies around the world. >>> Malaysia government must stop killing Buddhists, Christians, Hindus & non-Muslims Burmese migrant workers by state-sponsored gangs.
mwperth@cgmperth.net / malperth@kln.gov.my
contact@msda.org.au Continue reading “Please send Emails to Malaysian embassies around the world :STOP KILLING BUDDHIST,CHRISTIANS…..” →